HOR DHAC: West Ham United vs. Manchester United (West Ham waa kulan micno dareen wata ugu fadhiya balse United iyada waa u guul ama geeri!) – Gool FM
(London) 10 Maajo 2016. West Ham waxa ay dooneysa guul ay caawa markii ugu dambeeysay ugu gacan haatiso Boleyn Ground maadama ay kulankii ugu dambeeyey ku ciyaari doonto gegideeda caanka ah.
Waxaa xaqiiq ah in ay dhacdo dareen leh u ahaan doonto dubeyaasha iyaga oo soo gaba gabeyn doona 112 sano oo waayo ahaa, hayeshee, umuuraja kulankana waa mid aah muhiim u ah.
Manchester United iyada waxa ay dagaal ugu jirtaa kaalinta afraad maadama ay hada cida galeysa ay iyada go’aan ka gaari karto, hadii ay badiso caawa iyo kulanka ugu dambeeya booska iyada ayaa xiran doonta.
___ Anthony Martial waxa uu kulanka ku seegi doonaa dhaawac muruqa ah taas waxa ay fursad siin doontaa Memphis.
___Ma muuqato in Jesse Lingard wuu garabka biddix ku soo bilaaban doono maadama uu Juan Mata xejisan doono kaalintaas.
___ Louis Van Gaal waxa uu nasiyey Marcus Rashford iyo Deley Blind toddobaadkan weyna ku soo laaban karaa safka hore,
____ Matteo Darmia 16 daqiiqo oo qura ayuu ka dheelay ciyaartii Norwich kahor inta aan dhaawac ahaan kulanka looga saarin kama soo muuqan doono Boelyn Ground as
___ Marouane Fellaini maxa uu gudan doonaa ganaaxii labaad ee saddexddii garka loo galiyey ka mida.
___West Ham oo caawa macsalaameyn doonta gegideeda Upton Park iyada mushaakil safkeeda ah ma saarna.
___ Manchester United 14-kii kulan ee Premier League ugu dambeeyey ee ay la dheesho West Ham guul daro lama aysan kulmin (11 wey badisay saddexna bar bar dhac).
___ Weyne Rooney 11 ayuu ka dhaliyey 15 kulan oo uu ka hor yimi West Ham, sidoo kale waxaa rikoor ah in uu 7 uga dhaliyey gegida Boleyn Ground isaga oo koox kale ka soo jeeda.
____ Man United cel celis ahaan 2.19 dhibcood ayey ka heshay kulamada Premier League ee ay dheesho salaasada (Waxa ay ciyaartay 43 kulan, waxa ay badisay 28, 10 bar bar ayey gashay halka shan laga badiyey), waana natiijada ugu wanaagsan marka la bar bar dhigo dhamaan dhinacyada kale.
___ Kulankan waxa uu noqon doona kii 384-aad iyo kii ugu dambeeyey ee lagu dheelo Premier League gegida Boleyn Ground, guul ayey ku gaarto qolada leh waxa ay uga dhignaan doontaa in ay ku heshay 601 dhibcood (Waxa ay ku dheeshay (Waxa ay ku badisay 167, bar bar dhac 97 halka lagu garaacay 119).
CIYAARYAHANADA LAGA SOO XULI KARO SAFAFKA LABADA DHINAC
West Ham United: Randolph, Spiegel, Byram, Collins, Cresswell, Henry, O’Brien, Ogbonna, Oxford, Reid, Tomkins, Antonio, Cullen, Kouyate, Lanzini, Moses, Noble, Obiang, Payet, Samuelsen, Song, Carroll, Emenike, Jelavic, Sakho, Valencia.
Manchester United: De Gea, Romero, Borthwick-Jackson, Jones, McNair, Rojo, Smalling, Valencia, Varela, Blind, Fosu-Mensah, Carrick, Herrera, Januzaj, Lingard, Mata, Pereira, Schneiderlin, Young, Depay, Martial, Rashford, Rooney.
Gegida: Boleyn Ground
Saacadda Geeska Africa: 10:45Pm
Dhex dhexaadiyaha: Mike Dean
United caawa ayey go'aan gaari kartaa, City rajadadeeda xarig ayey ka lulataa laakiin kaalinta labaad Arsenal iyo Spurs ayaa ku gacan sareeya...? (Aqri si aad wax walba uga ogaato loolanka adag ee ka jira kaalmaha Champions League loogu soo boxo)